Uyisebenzisa kanjani i-sim iphone xs / max kwi-verizon, t-mobile nakwi-at & t
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uyisebenzisa njani i-Dual SIM iPhone XS / Max kwiVerizon, T-Mobile kunye ne-AT & T.
Uyisebenzisa njani i-Dual SIM iPhone XS / Max kwiVerizon, T-Mobile kunye ne-AT & T.
Mhlawumbi eyona nto intsha ingakhathalelwanga ye-iPhone XS kunye ne-XS Max zizakhono zabo zoBini zokuma kokubini, emva kweminyaka eli-10 yokucingisisa. Kubekho izigidi zabasebenzisi, ngakumbi eAsia okanye eYurophu, bephethe i-iPhone kunye nenye ifowuni, kuba iApple ibigcina olu khetho kunyaka olandelayo.
Ngeli xesha, ii-iPhones mhlawumbi ziya kuqhuma ngokubhekisele kwisabelo sentengiso eAsia naseYurophu, ngokuchanekileyo ngenxa ye-Dual SIM feature, njengoko kuyinto eqhelekileyo apho ukusebenzisa amanani amabini ngezizathu ezahlukeneyo, nokuba bacwangcisa amaxabiso, okanye Ukuhambela phesheya.
Oko akuthethi ukuba abasebenzisi beXS kunye neXS Max eMelika abanako ukuxhamla kukhetho lweSIM ezimbini, ngokunjalo nantsi into ethetha ngayo kwixesha elitsha xa unokusebenzisa izinto ezimbini ezithweleyo kwi-iPhone efanayo .
Uxolo, awuzukuphumelela ukusebenzisa iSprint ngexabiso eliphantsi elingenamda kunye neVerizon ehlawulelwe kwangaphambili
Ingaba ufuna ntoni: ivuliwe i-iPhone XS okanye iMax ene-iOS 12.1 Kunye nekhowudi ye-QR enikezwe umphathi okanye usetyenziso lokuseka i-eSIM
Okuunakoyenza: Sebenzisa i-CDMA enye kunye ne-GSM enye, okanye ezimbini ze-GSM. Fumana iifowuni kwaye uthumele izicatshulwa kuwo omabini amakhadi, kodwa hayi ngaxeshanye. Sebenzisa ikhadi elinye kwiifowuni / izicatshulwa, kunye nenye kwidatha. Gcina iiplani ezininzi ze-eSIM, kodwa sebenzisa enye kuphela ngexesha. Cwangcisa umgca okhethiweyo kunxibelelwano lomntu ngamnye, okanye iMessage / FaceTime.
OkuUnako & apos; tyenza: Sebenzisa izicwangciso zokuhambisa ezimbini ze-CDMA kwi-iPhone enye. Fumana 'ukulinda umnxeba' okanye 'ukuphoswa komnxeba / isicatshulwa' kwikhadi elinye xa usebenzisa elinye ngexesha lokufowuna okanye okubhaliweyo. Sebenzisa omabini la makhadi kwidatha.
Yintoni i-iPhone eSIM?
Emuva ngo-2010, abathwali baseYurophu baxhokonxwa yi-Apple kunye ne-apos; injongo yokuba nefuthe elingakumbi, ukuthengisa i-SIM khadi kwi-iPhone elandelayo, kwaye ivumele abantu ukuba bayikhanyisele ukuze bayisebenzise nabaphethe nantoni na abayifunayo ngokukhuphela usetyenziso olulula. Ewe, yile nto kunye ne-eSIM, i-chip yesimo semodyuli esichazayo esingenaso isiphatho seplastiki esijikelezileyo.
Ngelo xesha, abaphathi be-EU babesoyikisa ngokusika iinkxaso-mali abazikhuphela i-Apple kwi-iPhone nganye, kunye nokuthatha i-Apple promos kumakhasi abo asekhaya ngokuziphindezela okwexeshana. Ewe, inkxaso ngoku sele ihambile, kwaye i-honey badger ayikhathaleli, i-Apple ekugqibeleni yakhupha ii-iPhones zayo zokuqala ze-eSIM. Ngaphambili yayinee-iPads kunye neApple Bukela ngetekhnoloji, kodwa xa umhlaba kunye neemveliso ezithandwa kakhulu ngabathengi bezinto zombane zibandakanyeka, zonke izinto zokubheja eziphathwayo zicinyiwe.
Ukulinda okubini okanye ukuSebenza ngokuBini
Ngelishwa, iiApple kunye neeapos ziye zahluthwa yiQualcomm njengesela lepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kwaye i-Intel ithatha indawo kuphela de iApple ivelise iimodem zayo zeselula. Ke, kulo nyaka wotshintsho ngokubhekisele kunxibelelwano lwe-LTE, iApple ayizanga nesisombululo seSibini esiSebenzayo esisebenzayo kwii-iPhones ezintsha kodwa endaweni yoko ixhasa imo yokuLinda ngokuBini kuphela.
I-Dual Standby isathetha ukuba omabini amakhadi e-SIM angamamela iinethiwekhi zawo ngexesha elinye. Banokuvela kwinethiwekhi enye kwaye baxhume kwinethiwekhi efanayo ngokuzimeleyo ngokungathi uphethe iifowuni ezimbini ezahlukeneyo. Ke, yintoni umahluko okhoyo?
Ewe, inye kuphela iseti yehardware kuwo omabini amakhadi e-SIM, ke kuya kufuneka babelane ngayo, bekhokelwa ziinkqubo zesoftware. Akukho mahluko kwiifowuni ezimbini eziSebenzayo xa i-handset ikwimo yokulinda, kodwa ukuba ufumana umnxeba okanye uthumela imiyalezo kwikhadi elinye kwinethiwekhi ye-2G, enye iSIM khadi ayizukusebenza. Kwangokunjalo awuzukufumana saziso somnxeba ophosiweyo xa uthetha, kodwa ungathumela iifowuni kwinombolo yakho ephambili. Ngokuphathelene nedatha, unokusebenzisa idatha kwikhadi elinye ngexesha, kwaye awunakho ukukhangela kwelinye ikhadi lonke xa usefowunini.
I-Verizon, AT & T, T-Mobile, kunye ne-Sprint Dual SIM iPhone matrix
I-Apple inezona mpahla zinkulu zintathu zase-US zidweliswe njengezixhasa i-eSIM kwi-iPhone XS kunye ne-XS Max, kwaye iSprint iqinisekisile ukuba nayo iya kuba njalo. Ngokwendlela esebenzayo, xa kuziwa ekusebenziseni iVerizon okanye iSprint ezingabaphathi beCDMA, ungazisebenzisa kwiSIM enye, kodwa awunakho ukusebenzisa iCDMA kwenye. Nantsi into ekuthethwa ngayo:
I-AT & T.
umz Ewe Ewe Ewe Ewe
indawo ye-nano-SIM I-AT & T okanye iT-Mobile Iverizon, AT & T, T-Mobile okanye iSprint Iverizon, AT & T, T-Mobile okanye iSprint I-AT & T okanye iT-Mobile
Ukongeza, i-iPhone yakho kufuneka ivulwe ngumntu ophetheyo okanye ngu-Apple. Ngaphandle koko, uya kuba nakho ukusebenzisa iinkonzo ezimbini kuphela kwisiphatho esinye, kwaye ezo & apos zinee-GSM ezifana ne-T-Mobile okanye i-AT & T kuphela.
Ibali elifutshane elifutshane, ungalindeli ukuba nesicwangciso esinexabiso eliphantsi seSprint kwikhadi elinye, kuyo yonke into engenamda ezixekweni, kunye neVerizon ehlawulelwa kwangaphambili kwelinye icala yokugubungela indlela okanye ii-boondocks. Qhubeka.
I-pixel kaGoogle ijongeka njenge iphone
indlela yokwenza umfanekiso weskrini kwi-s10e
I-iPhone XR vs XS: Imowudi yePortrait yasebusuku ngokuthelekisa
I-Apple iPhone 5s vs Samsung Galaxy S4
Inqaku kubo bonke abasebenzisi beGPS S8: ukutshaja ngokukhawuleza kusebenza kuphela ngelixa isikrini sicinyiwe
Uyakwazi ukwenza kwakhona ukusebenza ngokuthepha kabini ukuvusa ukusebenza kwi-Nexus 6 yakho, nantsi indlela
Eyona nto iphambili yokuthenga ii-headphone ezingenazingcingo zeBluetooth ezinokuthengwa ngo-2021
Ivenkile yeApple ngoku ithengisa iseti yentloko ehambelana neVR eyi-iPhone
SUKUKhuphele i-Super Mario Run beta ye-Android naphi na ngaphandle kweGoogle Play
Azisekho iingxoxo zevidiyo zeqela kwiiHangouts; Abasebenzisi be-Android kufuneka basebenzise le app endaweni yoko
Idili: I-Minecraft yeNdlela yeNdaba yesiQendu 1 ngoku simahla kwi-Android nakwi-iOS
Ngaba useta kwakhona ifowuni yakho kangaphi? Iziphumo zovoto zingenile!